Wararka - Dhalista aan saliida lahayn dhab ahaantii uma baahna saliid saliidaysa?
Boorsooyinka aan saliida lahayn ayaa ah nooc cusub oo saliid ah, oo leh astaamaha biraha iyo saliidaha aan saliida lahayn. Waxaa lagu rakibay matoor bir ah oo lagu saliiday maaddooyin gaar ah oo saliidayn adag.
Waxay leedahay astaamaha awoodda qaadista sare, caabbinta saameynta, iska caabinta heerkulka sare iyo awoodda is-saliidinta ee xooggan. Waxay si gaar ah ugu habboon tahay munaasabadaha ay adag tahay in la saliido oo la sameeyo filim saliid ah, sida culeys culus, xawaare hoose, dib u soo celin ama leexin, mana ka cabsaneyso daxalka biyaha iyo daxalka kale ee aashitada.
Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay mashiinnada tuurista joogtada ah ee birta, qalabka duudduuban ee birta, mashiinnada macdanta, maraakiibta, marawaxadaha uumiga, mashiinnada mashiinka korontada ku shaqeeya, mashiinnada wax lagu duro ee la isku duro iyo khadadka wax soo saarka qalabka.
Qaadista saliid la'aantu waxay ka dhigan tahay in dhalidu ay si caadi ah u shaqeyn karto saliid la'aan ama saliid yar, halkii ay gebi ahaanba saliid la'aan noqon lahayd.
Faa'iidooyinka beenta aan saliida lahayn
Si loo yareeyo jahwareerka gudaha iyo xirashada beenta inta badan lagana ilaaliyo gubashada iyo isku dhejinta, saliida saliidda waa in lagu daraa si loo hubiyo howl qabadka hufan ee lagu kalsoonaan karo ee sitaarada si loo kordhiyo nolosha daalka ee jihada;
In laga takhaluso wasakheynta deegaanka ee daadadka ka imanaya;
Ku habboon culeys culus, xawaare hoose, dib-u-soo-celin ama isweydaarsiyo munaasabado ay adag tahay in la saliido oo la sameeyo filim saliid ah;
Sidoo kale kama cabsanayso wasakhda biyaha iyo daxalka kale ee aashitada;
Jaan-qaadyada la soo rogay ma aha oo kaliya inay badbaadiyaan shidaalka iyo tamarta, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin nolol ka cimri dheer mashiinnada simbiriirixan ee caadiga ah.
Taxaddarrada rakibidda dhalidda aan saliidda lahayn
Ku rakibida qaadista saliid la'aan waxay la mid tahay kuwa kale, faahfaahinta qaarkood waxay u baahan yihiin in la xuso:
(1) Go'aaminta haddii ay jiraan burooyin, soo-baxyo, iwm oo ku yaal dusha sare ee usheeda dhexe iyo usheeda dhexe
(2) Hadday jirto boor ama ciid oo ku taal dusha guryaha la qaado.
(3) In kasta oo ay jiraan xoqitaanno yar yar, xoqitaanno, iwm, waa in lagu saaraa dhagxaanta saliidda ama warqadda ciida ee wanaagsan.
(4) Si looga fogaado isku dhaca inta lagu guda jiro rarka, qadar yar oo saliid ah oo saliid ah ayaa lagu dari doonaa dusha sare ee usheeda dhexe iyo qolofta.
(5) adkaanta ku-dhalashada saliid la'aanta ah ee kuleylka darteed waa inuusan ka badnaan 100 darajo.
(6) Kaydiyaha iyo saxanka shaabadeeya ee saliidda aan lahayn waa inaan lagu qasbin.